Sirta Ku Gedaaman Roadmap-ka & Jiritaanka Qaranimada Somaliya (Aqriso Warqada) | KEYDMEDIA ONLINE
Sirta Ku Gedaaman Roadmap-ka & Jiritaanka Qaranimada Somaliya (Aqriso Warqada)
London (Keydmedia) - Markii dhowaan ay inta badan Xildhibaanada Baalrmaanka KMG ah ay xilkii ka xayuubiyeen Afhayeenka Golahaasi ayaa waxaa soo shaac baxaaya in Mr.Shariif Hasan uu xiriir hoose kala dhaxeeyo qaar ka mid ah kooxda isku magacaawda wakiilka Caalamka ee arrimaha Somaliya.
Xiisadan ayaa la sheegay in Hormuud ka yahay Wakiilka UN-ka ee Arrimaha Somaliya Mr. Augustine Mahiiga oo xiliyadii ugu dambeeyay afkiisa ay ka soo baxaayeen hanjabaado uu u jeedinaayo Odayaasha dhaqanka Muqdisho, aqoonyahaano iyo Siyaasiyiin kuwaasoo uu ku eedeeyay iney ka so horjeedaan rabitaankiisa, wuxuuna xusay iney talaabo ka qaadi doonaao xubnahaasi inkastoo uusan carabaabin.
Shalay ayaa Qoraal horey loogu diyaariyay shaqsiga madaxda ka ah Arrmiha gudaha iyo amniga uu ka soo saaray magaalada Garoowe kaasoo uu ku sheegaayo in muddo 4 todobaad ah hakad la geliyay howlihii Baarlamaanka isla markaasna aysan ku shiri karin xaruntaasi Xildhibaanada, waxaana lagu balansanaa in maalinta sabtida ah la qabto kulnakii lagu dooran lahaa Afhayeenka cusub, iyadoo la sheegay in Maleeshiyaad ka tirsan Xarakada Majmaca la geeyay xaruntaasi si uga ilaaliyaan in Xildhibaanada ay ku kulim.
Warar ayaa sheegaya in Mahiiga uu ka dalbaday Shariif Xassan inuu qoraalkaasi loo gudbiyay Shacbiga Soomalaiyeed, waana ayaan darro in xil walba oo shir loo qabto in loo meerriyo siyaasiyiin ku sheega Soomaalida.
Dhowaan ayaa Baarlamaanka cod aqlabiyad ah xilka uga xayuubiyey taariikhdu markay ahayd 13/12/2011, waa maalintii uu ka degayey magaalada Roma ee dalka Talyaaniga oo uu khiyaamo qaran ugu socday.
14-kii Bishatan Diseembar ayuu warqadda lifaaqan u qoray beesha caalamka isaga oo u maleeynaya inay maxkamad yihiin.
Warqadda waxa laga dhadhamin karaa inuu qaybo ka mid ah beesha caalmaka uu kala dhexeeyo heshiis gaar ah. Wuxu ku beer laxawsaday inuu keligii kala shaqaynayey Roadmap-ka, Reform-ka Baarlamaanka iyo dastuurka qabyo-qoraalka ah. Hoose ka akhri lifaaqa.
Qoraalka ayaa waxa ka muuqata in Mr.Shariif Xasan uusan garaadkiisu gaarsiineyn macnaha qaranimo iyo qiimaha ay ku fadhido. Ma ahan hawshiisa inuu u ololeeyo saddexda qodob ee kor ku xusan. Isaga waxa laga doonayaa inuu guddoomiyo baarlamaanka oo sharciyeynaya oo keliya.
Waxa marag ma doonta noqotay in baarlamaanka Soomaaliyeed uu oggol yahay saddexda qodob balse ay meesha ka maqan tahay lahaanshihii iyo mas'uuliyaaddii dowladda Soomaaliyeed ee la moodo in Amb. Mahiga iyo beesha caalamku ay mas'uul ka yihiin barnaamijka geedi-socodka Soomaaliya.
Doorka beesha caalmku waa taageeridda iyo la shaqaynta dowladda ee ma ahan inay Soomaaliya maamulaan, waxaana taasi daliil u ah Hanjabaadaha uu jeediyay Wakiilka Xoghayaha guud e ee UN-ka kaasoo u dhaqmay sidii Horjoogayasha Kooxda Shababka iyo kuwii ka horeeyay ee Hagaamiye kooxedyadii.
Beesha Caalamku hadda ka hor ayey dhicisaysay go'aan baarlamaan oo sharci ah; waa kii uu saddexda sano u kordhiyey jiritaanka baarlamaanka balse madaxda dalka ay ahayd in la doorto.
Go'aankaas si aan qaanuuni ahayn ayaa loola dagaalamay waxaana lagu wiiqay Heshiiskii Kampala oo dhaliyey ismaandhaafka maanta ka dhex aloosan hay'adaha federaalka KMG ah ee Soomaaliyeed.
Danjire Mahiga iyo qaybo ka mid ah kooxda isku magacaawda Beesha caalmaka ay dabin ama isbaaro u dhiganayaan go'aan sharci ah ee uu gaaray baarlamaanka Soomaaliyeed.
Balse baarlamaanka iyo shacbiga Soomaaliyeed ayey taladu u taallaa inay oggolaadaan in dalku uu gumeysi ku jiro iyo inuu yahay dal madax bannaan oo leh karaamadiisa qaranimo, waxaa tusaale nooga filan Hey'adaha saadaasha hawada ee Somaliya oo laga maamulo dalka Canada farac ugu furan yahay Nairobi.
Haddii beesha caalamku ay ku adkeysato la sii shaqaynta Shariif Xasan Sh. Aadan oo xilkii guddoomiyenimada baarlamaanka si sharci ah looga qaaday, waxa xaqiiqo in shirka loogu nagac daray tubta toosan (Roadmap-ka) uu la mid noqonaayo kuwii 15 ahaa ee ka horeeyay, iyadoo talabadani u muuqato in Dowlado iyo shasiyaad ajaaniib iyo Somali ah aysan dooneynin iney nidaam iyo kala dambeyn dalkaan lagu soo dabaalo, kooxdaan ayaa hadafkeedu uu yahay in dalka Soomaaliyeed uu u ahaado mashruuc ay ku danaysato, dhaqaalena ka kasbadaan.
HALKAAN KA AQRI SIRTA FAKATAY